ग्यास्ट्रिकले सताएर हैरान हुनुहुन्छ ? यी उपायबाट पाउनुहोस् छुटकारा – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /स्वास्थ्य/ग्यास्ट्रिकले सताएर हैरान हुनुहुन्छ ? यी उपायबाट पाउनुहोस् छुटकारा
काठमाडौँ । धेरै जसो नेपालीको पेवा बनिसकेको ग्यास्ट्रिकले धेरै लाई सताउने गर्दछ। पेट दुख्ने, पोल्ने, अम्लपित्त बढ्ने आदि लक्षणयुक्त समस्या नै ग्यास्ट्राइटिस हो।
लामो समयसम्म जाँड रक्सी, चिया, कफी,कार्वोनिक पेय कोक, पेप्सी आदि खानेहरूमा पनि यो रोग ज्यादा देखिएको छ। ग्यास्ट्राइटिस आत्मघाती प्रतिरक्षा प्रणालीको कारणले पनि यो रोग हुने गर्छ।
यसैगरी पेटको अपरेसन कलेजो, मिर्गौला, फियो तथा आन्द्राका रोग, एचआइभीरएड्स र विशेष मानसिक रोगावस्थामा पनि देखा पर्छ।
ग्यास्टिकको समायामानै उपचार हुन नसके अल्सर तथा क्यान्सर हुन सक्छ । अल्सर हुँदा बारम्बार रक्तस्रावले गर्दा रक्तअल्पताका समस्या देखा पर्छ।
यस्तै परनिसियस रक्तअल्पता, स्नायु तथा नाडीहरूको क्षय, अन्ननली सुन्निनु, दम बड्ने, मुखमा घाउखटिरा आइरहने, आन्द्रामा घाउ हुने, खानाको पाचन र अवशोषण सुचारु नहुने र मल निष्कासनमा जटिलता आई कब्जियतका लक्षण देखा पर्न सक्छन।